Version 0.3.0 – Bing (MSN) turjumaan
July 23, 2009 by dalabyo 1 Comment
Waxaan ku hanweynahay in ay taageero in la sii daayo this add to a engine turjumaad labaad. Mid ka mid Tani waa ka Bing (MSN) turjumaan by Microsoft.
Natiijada waxay siinaysaa yihiin oo dhawaqiisa laga maqlay kuwa aad ka hesho Google turjumi, mararka qaar si fiican, mararka qaarkood ka xun.
Dhac A yar yar hawshooda u default waa in adeegan weli waa in beta iyo marti-qaadayaa waa loo baahan yahay, Waxaan leenahay tiro aad u yar, waxaana sidaas wadaagi karaan haddii aad doonayso inaad ka mid ah, kaliya comment on this post, horta imanayo – sal marka hore u adeegay.
Sidoo kale – ma aannu firfircoonaan turjumaan Bing sida default turjuman automatic weli iyo waxaan jeclaan lahaa in aan maqlo fikradaada in. Haddii dad ku filan codsan habkaani, waxaan dadaal dheeraad ah u gelin doonaa this awood in la sii daayo socda. In Dhanka kale ee – aad soo dhaweeyay si ay u tijaabiso habkaani on this site, kaliya bilaabi tarjumidda iyo isticmaasho Bing soo jeedin badhanka.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: Bing (msn) turjumaan, google turjumi, yaryar, sii daayo, plugin wordpress
Judy C sheegay
Hi Waxaan jeclaan lahaa in ay isku dayaan in Bing turjumo fadlan, waxaan aadan ku faraxsaneyn caalamka turjumi violatiing google TOS iyo waxaan rabnaa in aan ku beddelato iyo waxaan jeclaan lahaa in ay isku dayaan mid kale.